You are here: Home Home Kulmiye wuu karayaaye: Miyuu kabmayaa, korayaa, mise wuu kadmayaa?
“Hi Boobe. Qaybtii u horeysay, taxanahan aad bilowday, waxaad xustay in SNS-ta xarunteedu ahayd Burco. Haddii aanan khaldanayn waxaan u haystay markii hore in xarunta SNS-tu ay ahayd Hargeysa, laakiin 1947kii annaga oo fasax ah, ahna koox arday ah ayay SNS-tu na geysay Jigjiga. Waxaanu ka qayb-gallay oo aanu nashiidooyin Carabiya ka akhrinay, xaflad lagu sagootiyayay Mr. RR Darlington (Gacma-dheere) oo laga beddelay shaqadii DC-nimada ee Jigjiga. Sannad ka dib ayuu isaga oo macallin ah Sheekh noogu yimid. Waxaan uga gol leeyahay waxa Xafladaa ka hadlay Muuse Cabdi Dheere oo lagu tilmaamay 'Al Mudiir-Al-Caam’. Taas oo macnaheedu yahay Guddoomiyihii SNS-ta isla markaana deggenaa magaalada Jigjiga, sidaas ayaan ugu maleeyay in xaruntu halkaa ahayd. Xoghayaha Guud wuxu ahaa Maxamuud Jaamac Uurdoox oo deggenaa Hargeysa.
Ereyga ‘politics’ oo u dhigma siyaasad waa erey asal ahaan ka soo jeeda afka Giriigga ee ah Πολιτικά (politika), oo laga soo qaatay Buuggii feylasuufkii Aristotle ee “Arrimaha magaalo-madaxda”, oo ahaa magaca Buuggiisii ku saabsanaa xukunka iyo xukuumadda oo af Ingiriisi loo tarjumay qarnigii 15aad. Markii Laatiinka laga dhigay ereygii wuxu isu beddelay "Polettiques". Sidaa darteed 1520kii ayay afka Ingiriisiga ku noqotay ‘politics’. Afka Giriigga marka aynu raacno, sida aan ka soo xiganayo ama ka soo dheeganayaba odeygeennii buuniga ahaa ee Google-ka, ereyga ‘politics’ (siyaasad) wuxu la xidhiidhaa ‘muwaaddinka’, ‘rayid’, ‘il-bax’, ‘ama wax ay dawladdu leedahay.’ Waa erey ka soo jeeda isku-darka πολίτης (polites), “muwaaddin” iyo πόλις (polis), "magaalo-madax ama xarun ah"